12 Virtual Museum Tours for Kids - Umndeni
Uhambo olungu-12 lweMyuziyamu Yezingane Ongazenza Kokulungile Okwesibili
Ukuhlala ekhaya kungakhungathekisa, kepha noma kunjalo uma unezingane ezincane ezigijimayo zifuna okuthile ezizokwenza. Ngenhlanhla, kule nkathi yedijithali iminyuziyamu eminingi ibeke amaqoqo ayo ku-inthanethi noma yakha izinkambo ezibonakalayo ezingasiza ekunciphiseni leso sithukuthezi. Ubuciko Namasiko weGoogle (ebuye ibe nohlelo lokusebenza) ifake ekhompyutheni amaqoqo eminyuziyamu emikhulu emikhulu, kusukela eVan Gogh Museum kuya e-MOMA yaseNew York. Akuzona zonke ezizokhanga izingane ngokuphelele, kepha eminye iminyuziyamu ilungele ukuzijabulisa online kuyo yonke iminyaka. Noma ngabe udinga uhambo oluya e-aquarium noma ufuna ukuhlola ezinye izidumbu, nazi ezinye izivakashi zemyuziyamu ezingokoqobo izingane zakho ezizokujabulela. (Futhi, konke lokhu kuvakashelwa kungaholela ekufundeni okuqhubekayo noma kuGoogling, okusho ukuthi isithukuthezi esincane kakhulu.)
OKUSHIWO: 15 Omkhulu Indoor Imidlalo for Kids
Okuhle kakhulu: Izingane zikhathazeka ngokweqile ngeGibhithe lasendulo noma izakhiwo zasendulo
ILouvre ingavalwa, kepha usengafinyelela ingcebo yayo eningi online. Uhambo olubonakalayo lomnyuziyamu waseFrance lukuyisa kweminye imipheme yalo, kufaka phakathi amanxiwa angaphansi komsele wamanzi wokuqala wesakhiwo, obuyela emuva ku-1190. Ungaphuthelwa yizinto zasendulo zaseGibhithe, lapho ungafunda khona kabanzi mayelana nenkathi yobupharagu. Ngenkathi yonke imnyuziyamu ingatholakali njengokuvakasha, okuningi kokuqoqwa kutholakala njengezithombe kuwebhusayithi yabo, ngakho-ke wena nezingane ningasesha imisebenzi ekhumbuleka kakhulu, kufaka phakathi UMona Lisa .
ama-movie omndeni okufanele abukwe
2. UMnyuziyamu waseBrithani
Okuhle kakhulu: Izingane zilungele ukuhlola umuzwa osebenzelana kakhudlwana
Wake wafuna ukubona iRosetta Stone noma umama wangempela? Ungabheki ngaphezu kweMyuziyamu yaseBrithani, obekufanele uyifunisise ngesikhathi seholide eLondon. Lolu hambo luyasebenzisana, nezinto zobuciko ezingasesheka ngesikhathi, isifunda noma uhlobo, futhi ungathola zonke izinhlobo zezinto ezithokozisayo, kufaka phakathi isheke lasebhange elivela kwaBarclays kanye nenkondlo ye-papyrus yaseGibhithe lasendulo.
Vakashela iBritish Museum
3. IMetropolitan Museum of Art
Okuhle kakhulu: Abahambi besikhathi esizayo
IMet Museum yaseNew York inengxenye yonke yewebhusayithi yayo enikelwe intsha ebizwa ngeMetKids. Okuhlangenwe nakho okuku-inthanethi kuphela kufaka umshini wesikhathi, lapho ungasesha ngesikhathi, umqondo noma indawo ukuthola izinto nezinto zobuciko ezivela kumagumbi omnyuziyamu. Ithuluzi lokusesha le-Big Ideas livumela izingane ukuthi zibheke ezihlokweni ezinjengokusungulwa, imfashini nezimpi, futhi zibone zonke izinto zobuciko ezifanele — indlela epholile yokufunda ngaphandle kokuthi kubonakale sengathi uyafunda. Kukhona namavidiyo, kanye nemephu exhumanayo yomnyuziyamu ekuvumela ukuthi uhlole imibukiso ehlukahlukene ezungeze isakhiwo.
IVan Gogh Museum
4. IVan Gogh Museum
Noma ngubani oke waya eVan Gogh Museum e-Amsterdam uyazi ukuthi kumangalisa kanjani ukubuka yonke imisebenzi yomculi endaweni eyodwa. Njengoba ungeke ukwazi ukusuka uye e-Amsterdam, thatha izingane zakho ohambweni olubonakalayo ngokuqoqwa nge-Google Arts & Culture. Ungaphuthelwa I-alimondi liqhakaza, omunye wemidwebo kawoyela ejabulisa kakhulu kaVan Gogh, ezolile futhi ethutha. Kuyindlela enhle futhi yokuxoxa ngomlando namasiko akwamanye amazwe, njengoba uVan Gogh epende eJapan futhi enezicucu ezimbalwa ezifanelekile eqoqweni.
Vakashela iVan Gogh Museum
5. IBoston Wezingane Museum
Okuhle kakhulu: Ukulingisa into yangempela
Imnyuziyamu yezingane kungaba indawo engcono kakhulu yokuthatha izingane uma seziyekile esikoleni, kodwa isipiliyoni esibonakalayo kuzodingeka sikwenze okwamanje. I-Boston Children's Museum yamukela izivakashi eziku-inthanethi emibonisweni yayo (ayikho imigqa!) Futhi ungangezela izithombe ngemisebenzi yakho yasekhaya nemidlalo.
Vakashela i-Boston Children's Museum
udwebe u-barrymore no-adam sandler
Win McNamee / Abasebenzi / i-Getty Izithombe
6. ISmithsonian National Museum Yomlando Wezemvelo
Okuhle kakhulu: Isipiliyoni semfundo ehlanganisa konke
Thatha uhambo lwakho lokuya eSmithsonian National Museum of Natural History, noma ngabe kungumbukiso wesikhashana noma iqoqo laphakade. Endleleni, hlola amathambo ama-dinosaur, izilwane ezivela emhlabeni wonke kanye nemiboniso edlule engasavezwa ngokoqobo. Kuyindlela enhle yokugcina izingane zakho zifunde ngomhlaba ozungezile noma ngabe zingakwazi ukuba sesikoleni, futhi kunemisebenzi eminingi yokulandelela noma ukufundwa ongakwenza ngemuva kohambo. Ngenkathi ulapho, yima ngeSmithsonian Castle neHirshhorn Sculpture Garden, zombili ezinokuvakasha okubonakalayo.
Vakashela iNational Museum of Natural History
ama-movie aphezulu ayimfihlakalo
7. Igalari Kazwelonke Yezobuciko
Okuhle kakhulu: Ukusizakala ngemibukiso eku-inthanethi kuphela
Omunye umnyuziyamu waseSmithsonian, iNational Gallery of Art inezinkulungwane zezinto nemidwebo online nge-Google. Ungahlola umbukiso wamanje Ukubumba Isizwe ukufunda ngezimfashini zaseMelika kusuka ngo-1740 kuya ku-1895, noma ukusesha ngezikhathi ezahlukahlukene, kusuka kubhasikidi kuya kubuciko besimanje. IGalari Kazwelonke iyikhaya leminye imisebenzi ebaluleke kakhulu, ngakho-ke funa eyakwaVermeer Owesifazane Olinganise , KaCassatt Intombazane Encane Esihlalweni Esihlaza Esihlaza noGauguin's Amazwi KaDeveli . Kuzokwenza ufune ukuvakashela into yangempela, ngakho-ke bheka ohambweni oluya e-D.C uma konke sekuphelile.
Vakashela i-National Gallery of Art
Okuhle kakhulu: Izingane noma intsha etadisha umlando wase-Europe
Igalari ye-Uffizi yeFlorence ingahlolwa ku-Google Arts & Culture, futhi kunobuciko obuningi obubonwayo. Iningi lemisebenzi lisuselwa ku-Renaissance (zilungiselele ukuchaza zonke izintokazi ezinqunu) futhi kugcizelelwa imidwebo yabaculi base-Italy. Akukona nje okuphathelene nemidwebo — iqoqo likutshela okuningi ngomlando wase-Italy nangababusi bezwe abedlule, okungasiza kakhulu uma unentsha efunda umlando wase-Europe kulo nyaka.
9. I-Easter Island
Okuhle kakhulu: Ukuthola umoya omusha
Thatha izinto ngaphandle uye e-Easter Island, lapho i-Google idale ukuvakasha okubonakalayo kwezithombe ezidumile zesiqhingi. Kukhona nevidiyo emfushane yesiqhingi nokudalwa kwayo okukhulu kwakudala, okungenza ithuba elihle lokuxoxa ngejografi yomhlaba nezingane zakho.
Ukuvakasha kwe-Easter Island
izinwele ezidumile zabesifazane
UJustin Sullivan / Getty Izithombe
10. IMonterey Bay Aquarium
Okuhle kakhulu: Ukuhlolwa kwasemanzini nohlangothi lokuzindla
Ubani ongafuni ukubheka amavidiyo anokuthula wempilo engaphansi kolwandle lapho edinga ikhefu kokungokoqobo? Amakhamera wewebhu abukhoma eMonterey Bay Aquarium azokujabulisa wena kanye nezingane zakho, ikakhulukazi i-penguin cam ethandekayo. Ukuze uthole okuthile okuthobisayo, bukela i-hypnotizing moon jelly cam noma i-kelp forest cam, ekhombisa oshaka bengwe abahamba phakathi kwe-kelp. Lapho ama-cams abukhoma engasebenzi (asebenza ngezikhathi ezithile ezithile), kunamavidiyo aqoshwe ngaphambilini okufanele uwagcwalise.
Buka i-Live Cam
Umnyuziyamu waseRoald Dahl
11. IRoald Dahl Museum kanye neSikhungo Sezindaba
Okuhle kakhulu: Izingane ezidle UJames neGeach Peach
Qala usuku lwakho ngohambo olubonakalayo lweRoald Dahl Museum kanye ne-Story Center, etholakala ngaphandle kwaseLondon, ngaphambi kokuba nosuku lokufundwa kwemarathon Abathakathi noma I-BFG ezinganeni zakho. Ungasesha embukisweni futhi ufunde kabanzi ngamaphandle amahle ngaphandle komnyuziyamu eBuckinghamshire. Yize kungaba lula ukuzizwa sengathi uphuthelwa ngokubona okuthile okuku-inthanethi, le myuziyamu iyithuba elihle lokungena emhlabeni omnandi wombhali ongasiza ngokweqa manje.
Vakashela iRoald Dahl Museum
Isikhungo Sokucwaninga seNASA Glenn
12. Isikhungo Sokucwaninga seNASA Glenn
Okuhle kakhulu: Ama-cadet wesikhala esizayo
Thatha uhambo olubonakalayo lwe-NASA Glenn Research Center noma i-Space Telescope Operations Control Center, ehlala iHubble Telescope. Kwa-NASA Glenn, cwaninga ngelebhu ye-ballistics impact noma i-supersonic wind tunnel, engaholela engxoxweni nge-physics ongahle ungahlonyiswa ukuba nayo. Ungakhathazeki, I-NASA inezinto eziningi online, ikwenza kube ngumthombo omuhle ngalesi sikhathi ekhaya.
Isikhungo Sokucwaninga seTour Glenn
Vakashela i-Hubble Telescope
OKUSHIWO: Ungasebenza Kanjani Usuka Ekhaya Nabantwana, Ngokusho Kwezinhlebi Ezincane '
ikhambi lasekhaya lezinwele zobuso
uchungechunge lomdlalo we-tv oluhle kakhulu lomndeni
ukwelashwa kokuwa kwezinwele ekhaya
ukuzivocavoca ekhaya ukunciphisa isisu
ungasusa kanjani izinwele ezingadingeki ebusweni ekhaya